Ny vato nangalan’ny Ntaolo handrafetana ny fasana-mandrakizay. Ny hazo hajan’ny tranokotona. Ny tany diavina isanandro no nahazoana ny biriky. Ny vy, nahitana ny lefona, nandresen’Andriamanelo ny Vazimba hoe.
Fahiny, ny mpandrafitra (hazo) dia andriana avokoa : 463 no isany teto Imerina tamin’ny taona 1885, ary avy any Avaradrano ny ankamaroany. Ny andriana ihany no mahazo miakatra hanamboatra na hanarina ny Trano Manara sy ny Trano Masina. Tamin’ny 1885, nampanantsoina ho ao Anatirova ny andiana mpandrafitra andriantompokoindrindra hanavao ny hazo sasany tamin’ny lapa Masoandro.
Nanomboka ny taona 1868 no nahazo vahana ny tambato: 786 no isany tamin’ny taona 1885 teto Imerina. Nofanin’i Jean Laborde tany Mantasoa ny sasany, niara-niasa tamin-dry James Cameron sy ny LMS (London Missionary Society) ny hafa taminy.
Ankoatra ny fasana miezinezina, tahaka ny Fasan-dRainiharo (1852), ny Fasan-dRatsarahoby, ny Fasan-dRainimboay, ny Tranovato voalohany dia ny Fiangonana Ambatonakanga (1867), niorina ivelan’ny vavahadin’Antananarivo. Nanaraka azy ny Fiangonana tranovato Ambohipotsy (1868), atsimon’ny hadin’Ankadinandriana. Nisesy nisosa tato aoriana Tranovato Faravohitra (1870), Tranovato Ampamarinana (1874), Katedraly anglikana Ambohimanoro (1889), Katedraly katolika Andohalo (1890).
Ny 3 septambra 1868 no niseho vahoaka Ranavalona II. Nanaraka io dia nofoanany ny fady mahakasika ny vato sy ny biriky amin’ny trano fonenan’ny velona. Zon’ny Andriamanjaka tsy azo refesina izany. Ka ny Tranovato Fiangonana Anatirova (20 jolay 1869 – 8 aprily 1880) no nandatsahany izany ho fehizoro. Tsy Jean Laborde (maty teto tamin’ny 1878 ary milevina any Mantasoa nananganany ilay tanàna-orinasa Soatsimanampiovana fony Ranavalona Reniny), tsy James Cameron (maty teto Antananarivo ny 3 oktobra 1875 rehefa nonina roapolo taona, 1826-1935 sy 1863-1875, ary milevina etsy Ambatonakanga), tsy William Pool (tonga teto 1865, tompomariky ny Tranovato Anatirova, ny lapan’Andafiavaratra ary ny fitsarana Ambatondrafandrana) no nandidy sy nanapaka izany, na inona fahatokisana napetraka taminy ary na inona fahaizany, fa ny Andriamanjaka.
James Cameron, ankoatra ny naha tompomarika ny Lapa Manampisoa (hazo) azy, tamin’ny andron-dRasoherimanjaka, dia mbola nanakinan’ny Mpanjaka Ranavalona II ny fandrakofana vato an’i Manjakamiadana ka nahazoana ilay endrika miavaka, sonia sy tombo-kase maha Antananarivo an’Antananarivo hatraiza hatraiza, lafivalon’ny Nosy ary vazantany efatra. Ireo manakiana indrindra ny nidiran’ny vato ho fonenana tao Anatirova no isan’ny saro-piaro amin’i Manjakamiadana : tsy ilay Manjakamiadana hazo natsangan’i Jean Laborde ho an-dRanavalona Reniny anefa, fa io Manjakamiadana vato manontolo io, ilay vato tsy kilan’ny afo tamin’ny 6 novambra 1995.
Basketball – Africa league : La GNBC dans la conférence de Sahara